Luka 23 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Luka Asɛmpa 23:1-56
Wɔde Yesu kogyinaa Pilato ne Herode anim (1-25)
Wɔbɔɔ Yesu ne akorɔmfo werɛmfo baanu asɛndua mu (26-43)
“Wobɛka me ho wɔ Paradise” (43)
Yesu wui (44-49)
Wosiee Yesu (50-56)
23 Enti nnipadɔm no nyinaa sɔree, na wɔde no kɔmaa Pilato.+ 2 Afei wofii ase bɔɔ no sobo+ sɛ: “Yɛahu sɛ saa ɔbarima yi sɔre tia aban; ɔka sɛ yenntua tow mmma Kaesare,+ na ɔka sɛ ɔno ne ɔhene+ Kristo.” 3 Afei Pilato bisaa no sɛ: “Wone Yudafo Hene no anaa?” Na obuaa no sɛ: “Wo ara na woreka.”+ 4 Ɛnna Pilato ka kyerɛɛ asɔfo mpanyin no ne nnipadɔm no sɛ: “Minhu bɔne biara wɔ ɔbarima yi ho.”+ 5 Nanso wɔkaa no denneennen sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛ wɔ Yudea nyinaa de sɛe nkurɔfo adwene; ofii ase wɔ Galilea, na ɔde abedu ha mpo.” 6 Bere a Pilato tee saa no, obisae sɛ ɔbarima no yɛ Galileani anaa. 7 Bere a ohui sɛ baabi a Herode di tumi no,+ ɛhɔ na Yesu fi no, ɔma wɔde no kɔmaa Herode a na ɔwɔ Yerusalem saa bere no. 8 Bere a Herode huu Yesu no, n’ani gyei yiye. Nea enti a ɛte saa ne sɛ, na watwɛn ara sɛ obehu Yesu, efisɛ na wate ne ho nsɛm pii,+ na na ɔpɛ sɛ Yesu yɛ sɛnkyerɛnne bi ma ohu. 9 Enti ofii ase bisaa Yesu nsɛm bebree, nanso wamma no mmuae biara.+ 10 Na asɔfo mpanyin no ne akyerɛwfo no sɔre gyinaa hɔ mpɛn pii, na wɔde abufuw bɔɔ no sobo. 11 Ɛnna Herode ne n’asraafo no guu n’anim ase,+ na wɔhyɛɛ no ataade fɛfɛɛfɛ dii ne ho agoru,+ na wɔsan de no kɔmaa Pilato. 12 Na Herode ne Pilato bɛyɛɛ nnamfo saa da no ara. Kan no de, na anka wɔyɛ atamfo. 13 Afei Pilato frɛɛ asɔfo mpanyin ne mpanyimfo* ne ɔmanfo no hyiaam, 14 na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mode ɔbarima yi brɛɛ me sɛ obi a ɔma nkurɔfo no tew atua. Na hwɛ! mehwehwɛɛ n’asɛm mu wɔ mo anim, nanso manhu nnyinaso biara wɔ nea mode bɔɔ no sobo no mu.+ 15 Nokwasɛm ne sɛ, Herode nso anhu biribiara wɔ ne ho, na ɔsan de no brɛɛ yɛn. Na hwɛ! ɔnyɛɛ biribiara a enti ɛsɛ sɛ owu. 16 Enti mɛtwe n’aso+ na magyaa no.” 17 *—— 18 Na nnipadɔm no nyinaa teɛɛm sɛ: “Kum saa ɔbarima yi,* na gyaa Baraba ma yɛn!”+ 19 (Saa Baraba yi, na wɔde no ato afiase, efisɛ na waboa ama nkurɔfo atew atua atia aban asan adi awu.) 20 Pilato ne wɔn kasae bio, efisɛ na ɔpɛ sɛ ogyaa Yesu.+ 21 Na wofii ase teɛteɛɛm sɛ: “Bɔ no asɛndua mu! Bɔ no asɛndua mu!”*+ 22 Na ɔne wɔn kasae mprɛnsa so sɛ: “Adɛn? Bɔne bɛn na ɔbarima yi ayɛ? Minhu biribiara wɔ ne ho a enti ɛsɛ sɛ owu. Enti mɛtwe n’aso na magyaa no.” 23 Afei wɔde nne kɛse kɔɔ so kae sɛ onkum no,* enti wɔn nne boroo no so.*+ 24 Na Pilato kae sɛ wɔnyɛ nea wɔrehwehwɛ mma wɔn. 25 Enti ɔde ɔbarima a na nkurɔfo no pɛ sɛ ogyaa no no maa wɔn, ɔbarima a aban so atuatew ne awudi nti, na wɔde no ato afiase no. Na Yesu de, ɔde no maa wɔn sɛ wɔnkɔyɛ no nea wɔpɛ. 26 Bere a wɔde no rekɔ no, wɔkyeree Simon, Kireneni bi a ɔnam kwan so reba kurom hɔ, na wɔde asɛndua* no soaa no sɛ ɔmfa nni Yesu akyi.+ 27 Ná nnipadɔm kɛse bi di Yesu akyi, na na mmea a wɔde awerɛhow rebobɔ wɔn koko, na wɔresu Yesu ka ho. 28 Ɛnna Yesu dan ne ho hwɛɛ mmea no, na ɔkae sɛ: “Yerusalem mma mmea, munnsu me. Na mmom munsu mo ho ne mo mma;+ 29 na hwɛ! bere bi reba a nkurɔfo bɛka sɛ, ‘Anigye ne abonin* ne yafunu a anwo ne nufu a wɔannum ano!’+ 30 Ɛnna wobefi ase aka akyerɛ mmepɔw sɛ, ‘Mummegu yɛn so!’ na wɔaka akyerɛ nkoko sɛ, ‘Monkata yɛn so!’+ 31 Sɛ dua no yɛ mono mpo na wɔreyɛ eyi a, ɛnde sɛ ewu a, dɛn na ebesi?” 32 Ná wɔde mmarima baanu bi a wɔyɛ akorɔmfo werɛmfo nso aka Yesu ho a wɔrekokum wɔn.+ 33 Bere a woduu baabi a wɔfrɛ hɔ Tikora+ no, wɔbɔɔ ɔne akorɔmfo werɛmfo no asɛndua mu wɔ hɔ, baako wɔ ne nifa, ɛnna baako wɔ ne benkum.+ 34 Na Yesu kae sɛ: “Agya fa kyɛ wɔn, efisɛ wonnim nea wɔreyɛ.” Bio nso, wɔbɔɔ ntonto kyɛɛ ne ntaade.+ 35 Na nkurɔfo no gyinaa hɔ hwɛɛ nea ɛrekɔ so. Na atumfo no dii ne ho fɛw kae sɛ: “Ogyee nkurɔfo; sɛ ɔno ne Kristo a ofi Onyankopɔn hɔ, Nea Wɔapaw No+ no a, ma onnye ne ho.” 36 Asraafo no mpo dii ne ho agoru; wɔbaa ne nkyɛn de nsã* a emu kaw maa no.+ 37 Na wɔkae sɛ: “Sɛ wone Yudafo Hene no a, gye wo ho.” 38 Ná wɔakyerɛw biribi nso abɔ n’atifi sɛ: “Oyi ne Yudafo Hene no.”+ 39 Na akorɔmfo werɛmfo a wɔsɛn dua so no baako fii ase kasa tiaa no+ sɛ: “Ɛnyɛ wone Kristo no? Gye wo ho na gye yɛn!” 40 Na nea ɔka ho no kaa n’anim sɛ: “Enti wunsuro Onyankopɔn koraa? Asotwe a wɔde ama no no, ɛnyɛ ɛno ara bi na wɔde ama wo? 41 Yɛn de, ɛfata yɛn, efisɛ nea yɛyɛe no so akatua na yɛn nsa aka yi. Na ɔbarima yi de, ɔnyɛɛ bɔne biara.” 42 Na ɔkae sɛ: “Yesu, sɛ woba w’Ahenni+ mu a, kae me.” 43 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Nokwarem mereka akyerɛ wo nnɛ sɛ, wobɛka me ho wɔ Paradise.”+ 44 Saa bere yi, na ɛbɛyɛ dɔn a ɛto so asia.* Nanso esum baa asaase no nyinaa so kosii dɔn a ɛto so akron,*+ 45 efisɛ owia ammɔ; afei ntwamutam a ɛwɔ kronkronbea+ hɔ no mu tew abien fi soro besii fam.*+ 46 Na Yesu de nne kɛse teɛɛm sɛ: “Agya, wo nsam na mede me honhom hyɛ.”+ Bere a ɔkaa saa no, owui.*+ 47 Nea ɔsraani panyin no hui sɛ asisi no nti, ofii ase hyɛɛ Onyankopɔn anuonyam sɛ: “Ampa, na ɔbarima yi yɛ ɔtreneeni.”+ 48 Na bere a nnipadɔm a wɔahyiam sɛ wɔrebɛhwɛ nea ɛbɛkɔ so no nyinaa huu nsɛm a asisi no, wɔsan kɔɔ wɔn fi. Wɔrekɔ nyinaa, na wɔrebobɔ wɔn koko. 49 Ná wɔn a wonim no nyinaa gyinagyina akyiri. Ná mmea a wodii n’akyi fii Galilea no nso wɔ hɔ, na wohuu nea ɛkɔɔ so no.+ 50 Na hwɛ! Ná ɔbarima bi wɔ hɔ a wɔfrɛ no Yosef. Ná ɔyɛ Bagua* no muni, na na ɔyɛ onipa pa a ɔteɛ.+ 51 (Ɛpɔw a wɔbɔe ne nea wɔyɛe no, na saa ɔbarima yi mpene so.) Ná ofi Yudafo kurow Arimatea mu, na na ɔretwɛn Onyankopɔn Ahenni no. 52 Saa ɔbarima yi kɔɔ Pilato nkyɛn kɔsrɛe sɛ ɔmfa Yesu amu no mma no. 53 Na oyii amu no fii asɛndua* no so,+ na ɔde nwera pa kyekyeree ho. Afei ɔde no kɔtoo ɔda a wɔatwa wɔ ɔbotan mu+ no mu, ɔda a wɔmfaa obiara ntoo mu da no. 54 Ná ɛyɛ Ahoboaboa Da,+ na na Homeda+ no rebefi ase. 55 Na mmea a wɔne Yesu fi Galilea bae no dii akyi, na wɔkɔhwɛɛ ɔda no, na wohuu sɛnea wɔde n’amu no too mu.+ 56 Na wɔsan kɔe kosiesiee aduhuam ne ngo huamhuam. Nanso wɔhomee Homeda+ no sɛnea mmara no kyerɛ no.
^ Anaa “akannifo.”
^ Hwɛ Nkh. A3.
^ Nt., “Fa oyi kɔ.”
^ Anaa “Fa no sɛn dua so kum no! Fa no sɛn dua so kum no!”
^ Anaa “ɔmmɔ no asɛndua mu.”
^ Anaa “enti ɔpaa abaw.”
^ Anaa “mmea a wɔnwo.”
^ Bɛyɛ awia 12.
^ Bɛyɛ awia nnɔn 3.
^ Anaa “emu tew wɔ ne mfinimfini fi soro besii fam.”
^ Anaa “ogyaa mu; ɔhomee ne home a etwa to.”
^ Anaa “Sanhedrin.”